Noocyada falaadhaha: sida ay u samaysan yihiin iyo astaamaha | Saadaasha Shabakadda
Bani aadamka waligiis wuxuu jeclaa shucaaca. Waa dheecaan awood badan oo koronto dabiici ah oo dabiici ah. Badanaa waxay dhacdaa inta lagu jiro duufaanka roobka oo dhaliya garaaca wadnaha. Qulqulka korantadan ee danab wuxuu la socdaa soo baxa iftiinka loo yaqaan magaca danab iyo codka loo yaqaan magaca onkodka. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira tiro badan noocyada falaadhaha iyadoo kuxiran asalka iyo qaabka ay leeyihiin.
Qormadan waxaan kuugu sheegaynaa waxa ay yihiin noocyada kala duwan ee falaadhku iyo sida ay u samaysan yihiin.
2 Sameynta noocyada danab
3 Noocyada Hillaacyada
Dheecaanka korantada ee ka soo baxa hillaaca waxaa weheliya nalka oo soo baxa. Sii-deynta iftiinkaan waxaa lagu yaqaan magaca hillaaca waxaana sabab u ah marinka korantada korantada oo ionalis ka sameysa maaddooyinka hawada. Dabadeed, dhawaq loo yaqaan magaca onkod ayaa la maqlay oo lagu horumariyo hirarka naxdinta leh. Korontada la soo saaray waxay dhex martaa jawiga, way kululaataa, si dhakhso leh ayay u ballaarisaa hawada waxayna soo saartaa buuqa astaamaha ah ee dhulka. Raajooyinku waxay ku jiraan xaalad plasmatic ah.
Dhererka celceliska ray waa qiyaastii 1500 mitir. Xamaasad ahaan, 2007, hillaaca ugu dheer ee la duubay wuxuu ku yaal Oklahoma wuxuuna dhererkiisu gaadhay 321 kilomitir. Hillaaca badanaa wuxuu ku socdaa xawaare celcelis ahaan qiyaastii 440 kilomitir ilbiriqsi wuxuuna gaari karaa xawaare gaaraya ilaa 1400 kilomitir ilbiriqsigii. Farqiga udhaxeeya waa malaayiin volt aniga oo laxiriira dhulka. Sidaa darteed, fallaadhahaasi waxay leeyihiin khatar sare. Qiyaastii 16 milyan oo dabeylo duufaan ah ayaa laga diiwaangeliyaa meeraha sannad kasta.
Waxa ugu caansan ayaa ah in noocyada kala duwan ee falaadhaha ay soo saaraan walxo togan oo dhulka ka mid ah iyo waxyaabo aan fiicnayn oo ku jira daruuraha. Tan waxaa u sabab ah koritaanka toosan ee daruuraha loo yaqaan cumulonimbus. Marka cumulonimbus gaaro tropopause (aagga dhamaadka troposphere), kharashka wanaagsan ee daruurtu leedahay ayaa mas'uul ka ah soo jiidashada eedeymaha diidmada ah. Dhaqdhaqaaqan eedeymaha ee loo maro jawiga ayaa ah waxa sameeya falaadhaha. Waxay badanaa sameysaa saameyn hore iyo mid dambe. Waxay loola jeedaa jajabyada isla markaaba kor u kaca isla markaana soo noqda taasoo keenta aragtida ah in falaadhku hoos u dhacaan.
Hillaacdu waxay soo saari kartaa awood deg-deg ah oo dhan hal milyan oo watt, taas oo u dhiganta tan qaraxa nukliyeerka. Anshaxa ku jira saadaasha hawada ee mas'uulka ka ah barashada hillaaca iyo wax kasta oo la xiriira waxaa loo yaqaan 'cerraunology'.
Sameynta noocyada danab
Sida shoogga korontadu ku bilaabmayo weli waa dood. Saynisyahannadu weli ma awoodin inay caddeeyaan waxa asalka u ah arrintan. Kuwa ugu caansan waa kuwa sheegaya in khalkhalka jawiga hawada uu sabab u yahay asalka noocyada danab. Rabshadahan jawiga ku jira Waxay u sabab yihiin isbeddelada dabaysha, huurka iyo cadaadiska hawo-qabadka. Saamaynta dabaysha qorraxda iyo isku soo ururinta walxaha cadceedda ku shaqeeya ayaa sidoo kale laga wada hadlay.
Barafka waxaa loo maleynayaa inuu yahay qeybta ugu muhiimsan horumarka. Waana sababta oo ah waxay mas'uul ka tahay dhiirrigelinta kala-soocida u dhexeeya eedeymaha togan iyo kuwa taban ee ku jira daruuraha cumulonimbus. Hillaac sidoo kale wuxuu ku dhici karaa daruuraha dambaska ee ka soo baxa fulkaanaha, ama sidoo kale waxay noqon kartaa natiijada dab xoog leh oo ka kaca kaynta oo dhaliya boodh awood u leh inuu abuuro lacag joogto ah
Qiyaasta indho-indheynta electrostatic waxaan haynaa in eedeymaha lagu wado habab aan wali hubin aadanaha. Kala saarista eedeyntu waxay u baahan tahay hawo xoog leh oo kor u socota, taas oo mas'uul ka ah qaadista dhibcaha biyaha kor. Sidan oo kale, marka dhibcaha biyuhu ay gaaraan dherer sare halkaasoo hawo qabow oo ku xeeran ay dhacdo, qaboojin degdeg ah ayaa dhacda. Caadi ahaan heerarkani waa kuwo la qaboojiyey heerkulkoodu yahay -10 iyo -20 digrii. Isku dhaca kristantiga barafka ayaa sameeya isku dar biyo iyo baraf loo yaqaan roob. Shilalka dhaca waxay keenaan in yar oo waxtar ah in lagu wareejiyo kiristaalo baraf ah iyo xoogaa diidmo ah oo baraf ah
Xilliyada kaladuwan ayaa kor u qaadaya kareemada barafka fudud ee kor u kaca waxayna sababaan qarashyo hagaagsan inay ku soo baxaan xaga dambe ee daruurta. Ugu dambeyntiina, ficilka culeyska dhulka ayaa ah waxa ka dhigaya roobdhagaxyaalaha eedeymo diidmo ah maadaama ay ka culus yihiin bartamaha iyo qaybaha hoose ee daruurta. Kala saarista khidmadaha iyo raasamaalku waxay socotaa illaa awoodda korantadu ay ku filnaato in la bilaabo dheecaan koronto.
Qiyaasta kale ee jirta ee ku saabsan habka kala-goynta waxay leedahay laba qaybood. Aan aragno waxa ay yihiin:
Barafka dhacaya iyo dhibcaha biyaha ayaa noqda kuwo koronto ku kala qaybsan xilligan ay ku dhacayaan dhulka korantada dabiiciga ah.
Dhacaya barafka way isku dhacayaan oo waxay ku dalacayaan induction electrostatic.
Sidaan horay u soo sheegnayba, waxaa jira noocyo kala duwan oo falaadho ah oo leh astaamo gaar ah. Hillaaca biriqda ugu caansan waa midka inta badan la arko waxaana loo yaqaanaa raajada socota. Tani waa qaybta muuqata ee raad raaca. Intooda badani waxay ku dhacaan daruur dhexdeeda si aan loo arki karin. Aan aragno noocyada waaweyn ee falaadhaha:
Hillaac daruur-ka-dhul ah: waa tan ugu fiican ee la yaqaan iyo tan labaad ee ugu caansan. Waxay u taagan tahay khatarta ugu weyn ee naf iyo maal. Waxay awood u leedahay inay saameyn ku yeelato dhulka iyo dheecaannada u dhexeeya daruuraha cumulonimbus iyo dhulka.
Ray luul: waa nooc ka mid ah hillaaca daruur-ilaa-dhul ah oo u muuqda inuu ku soo dhacayo silsilad qaybo gaagaaban oo dhalaalaya
Hillaac Staccato: Waa nooc kale oo hillaaca daruur-ka-dhul ah wuxuuna leeyahay muddo gaaban oo umuuqda inuu kaliya yahay birbirq. Badanaa waa mid dhalaalaya oo leh culeysyo badan.
Daruur ilaa hillaac daruur: waxay ka dhex dhacdaa aagagga aan dhulka taaban. Waxay badanaa dhacdaa marka laba daruurood oo kaladuwan ay dhaliyaan kala duwanaansho ku timaadda korantada.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto noocyada kala duwan ee falaadhaha iyo astaamahooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Noocyada Hillaacyada
Mawjadaha dhul gariirka